समाचार » Home
रुदै सुरेन्द्र मालले मागे न्याय, मलाई जबरजस्ती केटी बनाए, म केटा बन्न चाहन्छु ! (भिडियो सहित)
"ंसन्सारमा मानिस भन्ने जीव जतिको स्वार्थी सायदै अरु जीव जन्तु होलान ।" मानिस नै यस धर्तिको सबैभन्दा धेरै स्वार्थी प्राणी हो। मानिसले आफ्नो काम बनाउनको लागि अरुलाई के असर पर्छ भनेर सोचेको हुन्न। त्यस्तै घटना अहिले नेपाल सुरेन्द्र मालको जिवनमा । ंभारत जाने, त्यहि पढ्ने अनि केही कमाएर पठाउने आसमा आफ्नो छोरालाई.....
प्रेमिलाई १२ लाख दिएर छोरीले नै आमाको हत्या गर्न लगाएको खुलासा !
काठमाडौं - आफ्नै आमाको हत्या आरोपमा छोरी पक्राउ परेकी छन्। भक्तपुरकी ईश्वरी भट्टराई आफ्नै आमाको हत्या आरोपमा पक्राउ परेको अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले जानकारी दिए। सावित्री भट्टराईको हत्या उनकै छोरीले गराएको खुलेको हो । छोरी ईश्वरीकै घरमा बस्दै आएकी ६१ वर्षीया सावित्रीको गएको आइतबार बिहान.....
काठमाडौंको जमलमा डरलाग्दो कार दुर्घटना !
काठमाडौंको जमलमा एक कार दुर्घटनामा परेको छ । केशरमहलबाट जमलतर्फ गइरहेको बा ११ च ३६०४ नम्बरको कार शनिबार बिहान ६ बजेतिर दुर्घटनामा परेको हो । ट्राफिक प्रहरीले यस कार दुर्घटनालाई ‘भयानक’ भनेको छ । यद्यपि मानवीय क्षति भने भएको छैन । दुर्घटनामा चालक बिजेन दुवाल श्रेष्ठ सामान्य घाइते भएका छन् । कारमा तीन जना.....
ढल्कुमा जेनी (नाम परिर्वतन) माथि भएको आक्रमणको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । प्रहरीले आक्रमणमा संलग्न सन्तोष कार्कीलाई पक्राउ गरेसँगै घटनाको सीसीटीभी फुटेज पनि सार्वजनिक भएको हो । जेठ ३२ गते राति करिव १० बजेतिर कुकुर लिएर सडकमा निस्किएकी उनीमाथि मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिले आक्रामण गरेका थिए । सिरिन्ज आक्रमण.....
गैडहवा गाउँपालिकामा १४ जनाबाट २ युवतीको सामूहिक बलात्कार !
रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकामा १४ जनाको समूहले दुई युवतीको सामूहिक बलात्कार गरेका छन् । त्यसमा संलग्न भएको आरोपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका गैंडहवा संयोजक समेत पक्राउ परेका छन् । घटना २ असारको साँझ हो । तर एक सातापछि उजुरी परेको प्रहरीले जनाएको छ । पीडित युवतीहरुले दिएको जाहेरीअनुसार उनीहरु.....
लुगा काट्ने कैँची प्रहार गरी श्रीमतीको बीभत्स हत्या !
डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका– ३ मा एक व्यक्तिले श्रीमतीको हत्या गरेका छन्। दिपायल सिलगढी नगरपालिका– ३ का ४५ वर्षीय कृष्ण नेपालीले श्रीमती ४० वर्षीया मिना नेपालीलाई लुगा काट्ने कैँची प्रहार गरी हत्या गरेका प्रहरीले जनाएको छ। श्रीमतीको हत्या गर्ने कृष्णलाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय दिपायलका.....
२४ वर्षे युवाको अप्रेसन गर्दा पेटमा ५० भन्दा बढी वस्तु फेला पारेपछि …. !
भारतको राजस्थानस्थित एक अस्पतालमा शनिबार पेट दुख्यो भनेर गजेन्द्र के अस्पताल पुगे । सुरूमा डाक्टरहरूले उनकाे जाँच गरे । जाँच गर्दा डाक्टरले युवाकाे पेटमा केही सामान रहेकाे अनुमान गरे । जब जाँच गरी युवाको अप्रेसन भयाे । सबै डाक्टर अनाैठाेमा परे । सबै डाक्टरहरू दंग भए । सोही स्थानका २४ वर्षे ती युवाको अप्रेसन.....
काठमाडौंबाट ८२ पाकेटमारलाई पक्राउ !
काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुले ८२ जना पाकेटमारलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । विशेष अभियान सञ्चालन गरेर सवारी साधानमा पाकेटमारी गर्ने र विभिन्न ठाउँबाट चोरी गर्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक गरिएको हो । काठमाडौं प्रहरीका डीएसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार सार्वजनिक सवारी साधानमा पाकेटमारी र चोरीका घटना बढेको.....
ठुलीआमाले नै गरिन् छोरीको बलात्कार, छिमेकी फसाउन यस्तो गरेको खुलासा !
नेपाली उखान नै छ, सौताको रिसले पोइको काख … । बारामा यस्तै भएको छ, पारिवारिक विवादमा छिमेकीलाई फसाउन एक महिलाले दुई वर्षीया बालिकालाई ‘बलात्कार’ गरेकी छन् । घटना बाराको माइगढीमाई–१, तेगछिया टोलको हो । बिहीबार दिउँसो दुई वर्षीया बालिका आकृति (नाम परिवर्तन) विक्षिप्त अवस्थामा छिमेकीको घर अगाडि भेटिएकी थिइन्.....
ललितपुरमा घट्यो अर्को दुखद घटना, आमा-छोरीको शव झुन्डिएको अबस्थामा भेटियो !
ललितपुरको महाँकाल गाउँपालिकामा आमाछोरी शव झण्डिएको अवस्थामा भेटिएको छ। बिहीबार बिहान महाँकाल गाउँपालिका–४ कालेश्वर बतासे डाँडामा आमाछोरीको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा ५ महिनाअघि मुगुबाट कालेश्वर बसाईं सरेर आएका जानी शर्मा र उनकी छोरी राधिका शर्मा रहेको प्रहरी चौकी कालेश्वरका.....
नेपाली कथानक चलचित्र ‘पण्डित बाजेको लौरी’ सार्बजनिक ! (हेर्नुहोस भिडियो)
उत्कृष्ट गीत के लेईदिउ कोसेली “भिर्ने झोलामा” सार्बजनिक ! (हेर्नुहोस भिडियो)
शुक्रवारबाट महिला चेम्बरको तीज व्यापार मेला शुरु हुदै, महिला उद्यमीले उत्पादन गरेका सामाग्री प्रदर्शन हुने !
फेसबुकले ल्याउदै न्युज ट्याव, यस्तो छ न्युज ट्याबको फाईदा !
माल्दिभ्समा बिमल बने हिरो !
यस्तो छ, नायक आकाश श्रेष्ठ र मोडल एलिसा राईको ‘टेलिफोनको टावर’ ! (हेर्नुहोस भिडियो)
एउटा यस्तो गाउँ, ९ वर्षदेखि छोरीको मात्रै जन्म, छोरा जन्माउने दम्पतीलाई पुरस्कारको घोषणा !
यसकारण चिनियाँ अभिभावक आफ्ना छोराछोरीको बिबाह छिटो गराउन चाहन्छन् !
आर्यन, स्वस्तिमा, सलोन के गर्दैछन ‘हजार जुनी सम्म’मा (हेर्नुहोस भिडियो)
‘लभ डायरीज’को ‘सुन्यौ कि सुनेनौ’ बोलको रोमान्टिक गीत रिलिज (भिडियो)
“आइफा” कार्यक्रम काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार !
४ प्रेसर कुकर बम सहित ७ पक्राउ, लगनखेलको बम डिस्पोज, ग्वार्को र सातदोबाटोमा पनि शंकास्पद वस्तु
नेपालका सबै “एटीएम” मेशिनमा “नेपाली भाषा” अनिवार्य राख्नुपर्ने
सार्बजनिक “बस”मा यात्रा गर्दै “मुख्यमन्त्री”
प्रदेश ५ को नाम “मगरात” राख्न मुख्यमन्त्रीलाई ११ लाखको हस्ताक्षर
सुन्दा नै अचम्म लाग्ने, भारतिय नागरिक नेपालका वडा अध्यक्ष !
प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको छोरीको विवाह (तस्बिर हेर्नुहोस)
कांग्रेस सांसद र प्रधानमन्त्री ओलीबीच सांसद मा नै यस्तो जुहारी
प्रधानमन्त्रीको प्रश्न, “कसको सरकार भन्ने त राष्ट्रपतिले ? कि निबन्ध पढ्ने ? (भिडियो सहित)